SAWIRRO: Montella oo markii ugu horreeysey booqday xerada tababarka & xarunta AC Milan (Kulan uu la qaatay Galliani) – Gool FM
SAWIRRO: Montella oo markii ugu horreeysey booqday xerada tababarka & xarunta AC Milan (Kulan uu la qaatay Galliani)
Raage July 4, 2016
(Milano) 04 Luulyo 2016 – Guddoonka AC Milan ee Adriano Galliani ayaa xaqiijiyey inuu kulan wanaagsan la yeeshay macallinka cusub ee Vincenzo Montella, balse wuxuu ka gaabsaday su’aalihii weriyayaasha.
La guddoomiyaha Milan ayaa la rumaysan yahay inuu macallinka cusub la dejinayey qorshaha cusub ee suuqa kala iibsiga, balse waxaa jirta hubaal la’aan badan oo ku hareeraysan naadiga, jeer la sugayo inay kooxda la wareegto dallad Chinese ah oo hoos tagta dowladda China.
Montella oo maanta yimid Milano isla markaana booqday xerada tababarka Milanello iyo xarunta ay saldhigato Milan ee Cassa Milan ayaan la ogayn wixii ay ka wada hadleen Galliano.
Mar Galliani la waydiiyey kulanka labadooda dhexmaray wuxuu MilanNews ku yiri: ‘Runtii wuxuu ahaa kulan aad u wanaagsan’. Isagoo su’aalihii kale iska indha tiray oo iska dhaqaaqay.
Milan oo doonaysa daafac qaali ah (Imisa ayuu ku kacayaa?)